विवाहित युवा युवतीले अझै परिवार नियोजनका साधनको गर्दैनन् वास्ता
२०७३ असोज १० सोमबार, काठमाडौं। सरकारले परिवार नियोजनसम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि कम उमेरमै विवाह गर्ने र छिट्टै बच्चा जन्माउने किशोरीको सङ्ख्यामा कमी आउन सकेको छैन । कम उमेरमा विवाह गर्ने किशोर–किशोरीले परिवार नियोजनका साधन कम प्रयोग गर्ने गरेको तथ्याङ्क परिवार स्वास्थ्य महाशाखासँग छ । सबै स्थानमा सहजरुपमा यस्ता साधन उपलब्ध नहुने, साधनप्रतिको नकारात्मक धारणा, सेवाको गुणस्तरीयतामा कमी, दम्पती अलग बस्ने क्रममा वृद्धि र आकस्मिक परिवार नियोजन ... बाँकी अंश»
२०७३ असोज ९ आइतबार, काठमाडौँ । मिर्गौला समस्याका कारण धेरैले अकालमा जीवन गुमाउनुपरेका घटना पछिल्लो समयमा आइरहेका छन् । आयुर्वेद उपचारपद्धति मिर्गौला उपचारका लागि वरदान सावित हुँदै आएको छ । आयुर्वेद उपचार पद्धतिले राम्रो स्वास्थलाभ लिएर पहिलेकै अवस्थामा खुसी जीवन बिताइरहेका धेरै मानिस छन् । गत वैशाखमा काठमाडौँ नयाँबजारका ५७ वर्षीय टीका राणालाई असहज महसुस भयो । त्यसपछि उनी उपचारका लागि अस्पताल गए । डाक्टरको उत्तर सुनेर उनलाई झन् असजिलो भयो । उनले भन ... बाँकी अंश»
२०७३ असोज ८ शनिबार, काठमाडौँ। मानिसले स्वस्थ खानपिन गर्ने, व्यायाम गर्ने र आफ्नो जीवनशैलीमा ध्यान दिएमा सम्भावित मुटुरोगबाट बच्न सकिने मुटुरोग विशेषज्ञले बताएका छन् । आज नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले विश्व मुटु दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अस्पतालका मुटुरोग विभाग प्रमुख तथा मुटुरोग विशेषज्ञ प्रा डा यादव भट्टले मद्यपान नगर्ने र दैनिक आचरणमा ध्यान दिने हो भने मुटुसम्बन्धी समस्याबाट बच्न सकिने बताए। उपयुक्त उपचार, नियमित औषधि सेवन र ... बाँकी अंश»
२०७३ असोज ७ शुक्रबार, भक्तपुर । भक्तपुर नेपालमै पहिलो योग जिल्ला घोषणा हुने भएको छ । योग जिल्ला घोषणा मूल समारोह समिति भक्तपुरले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा योग जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी पूरा गरेकोबारे पतञ्जली योग समितिका केन्द्रीय सदस्य एवम् मूल समारोह सचिवालय सदस्य बालमुकुन्द सुवालले जानकारी दिए । भक्तपुरमा १० देखि ७० वर्ष उमेर समूहका दुई लाख ५० हजार ४३९ जनसङ्ख्यामध्ये ५५ प्रतिशत नागरिक योगाभ्यासमा रहने गरेकाले जिल्लालाई योग जिल्ला घोषणा गर्न लागिएको उनल ... बाँकी अंश»
सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गरिन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री थापा
२०७३ असोज ६ बिहिबार, चितवन । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले दुई महिनाभित्रमा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने बताएका छन् । भरतपुर अस्पतालको सी ब्लक भवनको शिलान्यास गर्दै मन्त्री थापाले सबै नेपालीले सहज स्वास्थ्य सुविधा पाउन् भन्नका लागि बिमा योजना ल्याउन लागिएको बताए । अति विपन्न जसले बिमा शुल्क तिर्न सक्दैन उनीहरुका लागि राज्यले बिमा शुल्क तिरेर सबै नेपालीलाई बिमामार्फत स्वास्थ्य सेवा दिने तयारीमा सरकार रहेको मन्त्री थापाले सुनाए । देश ... बाँकी अंश»
२०७३ असोज ६ बिहिबार, खोटाङ । जिल्लाको उत्तरी गाविस हौंचुरस्थित शारदा माविका ‘मास हिस्टेरिया’ प्रभावित छात्रा र अभिभावकलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरिएको छ । मास हिस्टेरियाका कारण विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय दिक्तेलले मंगलबार हौंचुर पुगेर प्रभावित छात्रा तथा उनीहरुका अभिभावकलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरेको हो । गत असार दोस्रो सातादेखि छात्रामा देखिएको मास हिस्टेरिया नियन्त ... बाँकी अंश»
नेपाल प्रहरी अस्पतालमा अझै प्रमुख तोकिएनन्
२०७३ असोज ४ मंगलबार, काठमाडौं । नेपाल प्रहरी अस्पतालको प्रमुख तोक्नमा सरकारले ढिलाइ गरेको छ । अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर एआइजी डा सुमन सम्शेर जवराले गत साउन २८ गते नै अवकास पाइसकेका छन् । त्यसपछि सिनियर डीआइजी डा. दिनेश चन्द्र पोख्रेलले निमित्त मेडिकल डाइरेक्टरको भूमिका निभाइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्री परिषद बैठकले मेडिकल डाइरेक्टर तोक्ने गर्छ । गृहकै ढिलाइले गर्दा अहिलेसम्म डा. पोख्रेलले निमित्तमै काम चलाइरहेका छन् । मेडिकल डाइर ... बाँकी अंश»
बाजुरामा तेस्रो परिवार नियोजन दिवस मनाइयो
२०७३ असोज २ आइतबार, बाजुरा । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरा अन्तर्गत परिवार नियोजन दिवस मनाइएको छ । व्यवस्थित परिवार स्वास्थ्य र विकासको आधार भन्ने मुल नाराका साथ राष्ट्रिय दिवस मनाइएको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराको आयोजनामा उक्त दिवस मनाइने भएको हो । दिउसो ३ वजेबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट सुरु भएको र्याली बजार परिक्रममा गरी अनन्ते मेला लाग्ने ठाउमा आएर कोण सभामा परिणत भएको थियो । परिवार नियोजन दिवसमा छोरा छोरी करले होइन रहरले जन्माउनु ... बाँकी अंश»
दोस्रो विश्वयुद्ध ताका जापानी सेनालाई लाग्ने रोगले नेपाली हैरान, आठको मृत्यु
२०७३ असोज २ आइतबार, रत्ननगर (चितवन)। नेपालमै पहिलोपटक ‘स्क्रब टाइफस’ रोग सार्ने एक प्रकारको किरा ‘माइट’ मा ब्याक्टेरिया (जीवाणु) भएको पुष्टि भएको छ । उक्त ब्याक्टेरियाको नाम वरेन्सिया सुसुगामुसी हो । इपिडिमियोजोजी तथा सरुवा रोग महाशाखाले बाह्य विशेषज्ञसहितको टोली ल्याएर चितवनका मुसामा गरेको अध्ययनबाट यस्तो पुष्टि भएको हो । सन् १९९७ ताका नेपालमा माइट भएको पत्ता लागेको भए पनि सङ्क्रमित छ छैन भनेर परीक्षण भएको थिएन । “यसपटकको परीक्षणले भने माइट पनि सङ् ... बाँकी अंश»
स्क्रब टाईफसको प्रकोप बढ्यो,दुई जनाको मृत्यु
२०७३ असोज १ शनिबार, चितवन । गत वैशाखदेखि देखिएको स्क्रब टाईफस रोगबाट हालसम्म जिल्लामा २०५ जना प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार वैशाखमा एक, जेठमा एक, असारमा ३१, साउनमा ७७ र भदौ महिनामा ९५ जनामा यो रोग देखिएको छ । कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोलर राम केसीका अनुसार चितवन मेडिकल कलेजमा १८८, नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा नौ र भरतपुर अस्पतालमा आठ जनामा यो रोग देखिएको हो । चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत चितवन र तनहुँ ... बाँकी अंश»
२०७३ भदौ ३१ शुक्रबार, रोल्पा। चिकित्सा क्षेत्रको विसङ्गति अन्त्यको माग गर्दै नवौँ सत्याग्रहको घोषणा गर्नुभएका डा गोविन्द केसीले रोल्पाको सुलिचौरको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चलाउनुभएको दुई दिने स्वास्थ्य शिविरमा करिब ३५० बिरामीको उपचार भएको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा केसी झोलामा औषधि बोकेर बुधबार रोल्पा पुगेका थिए। शिविर सम्पन्नपछि उहाँ आज बिहानै बसबाट काठमाडौँ फर्किनु भएको स्वास्थ्य केन्द्र सुलिचौरका प्रमुख डा मिलन बज्राचार्यले बत ... बाँकी अंश»
२०७३ भदौ ३१ शुक्रबार, बझाङ। घरमा सुत्केरी गराएका कारण एक जना महिलाको ज्यान गएको छ। घरमै सुत्केरी भएकी भातेखोला गाविस वडा नम्बर एक द्धारी कौसाण बस्ने ३० बर्षीया सुन्तला देवी कठायतको मृत्यु भएको हो। जिल्लामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले नो होम डेलिभरी अभियान सन्चालन गरेको बताए पनि घरमा सुत्केरी भएकी कठायतको अत्यधिक रक्तश्रावका कारण ज्यान गएको हो। स्थानिय गोपाल कठायतले सुन्तला देवी कठायत सुत्केरी भएको बेला अत्याधिक रगत बगेका कारण मृत्यू भएको बताए। उनको रक्तश्राव धेरै ... बाँकी अंश»
२०७३ भदौ ३१ शुक्रबार, कञ्चनपुर । संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले महेन्द्रनगर बजारको गल्ली नम्बर—२ स्थित श्रीराम डेन्टल हस्पिटलमा बिहीबार ताला लगाएको छ । श्रीराम डेन्टल हस्पिटल दर्ता नभएको र हस्पिटलमा सम्बन्धित व्यक्ति नभेटिएकाले अनुगमन टोलीले ताला लगाइएको हो । डेन्टल हस्पिटलमा केही मात्रामा औषधि राखिएको र सम्बन्धित कागजात नभेटिएका कारण ताला लगाइएको अनुगमन टोलीका संयोजक उदयराज जोशीले बताए । अनुगमन टोलीले बिहीबार कञ्चनपुरका १० वटा निजी स्वास्थ ... बाँकी अंश»
स्वास्थ्य संरचना बदल्ने र सेवा 'जनमुखि' बनाउने अवसर यही हो : मन्त्री थापा
२०७३ भदौ ३० बिहिबार, काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले यो स्वास्थ्य संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न सकिने समय रहेको बताएका छन् । राजधानमीमा स्वास्थ्य खबर पत्रिकाले आयोजना गरेको ‘हेल्थ अवार्ड’ वितरण समारोहमा मन्त्री थापाले पहिलेको संरचनामा परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिने अवस्थै नरहेको बताए । मन्त्री थापाले भने, ‘विगतमा हामी संरचना बदल्न सक्ने अवस्थामा थिएनौं । अहिले स्वास्थ्य संरचना बदल्ने अवसर आएको छ । अब हामी संरचना बदल्न सक्छौं । स्वास्थ्य सेवालाई ज ... बाँकी अंश»
सप्तरीमा झाडापखालाको प्रकोप, ६० जना बिरामी
२०७३ भदौ ३० बिहिबार, राजविराज। सप्तरीको जमुनी मधेपुरा गाविस–२ मा विगत चार दिनदेखि झाडापखालाको प्रकोप फैलिएको छ । चार दिनदेखि फैलिएको झाडापखाला प्रकोपले सो गाविसका २५ परिवारका करिब ६० जना व्यक्ति सिकिस्त बिरामी परेको बताइएको छ । सोही ठाउँका शङ्कर शर्मालगायत उनको श्रीमती र छोराछोरीलाई झाडापखाला लागेपछि सो गाविसका अधिकांश व्यक्तिमा फैलिएको र झाडापखालाले गाउँमा रहेका बालबालिका, वृद्धवृद्धासहितका व्यक्ति बिरामी परेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको ... बाँकी अंश»
डायबेटिज भएकालाई लक्षित गरी महाराजगंजमा खुल्यो सुगर फ्री सप
२०७३ भदौ ३० बिहिबार, काठमाडौ । आधुनिक जीवनशैली, व्यस्तता, मानसिक तनाव तथा शारीरिक व्याममको कमिले हुने डायबेटिज (चिनी रोग) भएकाहरुलाई लक्षित गरी आउटलेट खोलिएको छ । विभिन्न ब्रान्डका सुगरफ्रि खाद्यबस्तुहरुलाई एउटै आउटलेटबाट विक्रि वितरण सुरु गरिएको प्रोपाइडर सबिन भट्टराईले बताए । महाराजगंजस्थित अमेरिकन दुतावास नजिकै खोलिएको आउटलेटमा बिक्री बितरण सुरु गरिएको छ । यस आउटलेटले सुगर भएका व्यक्तिहरु तथा स्वास्थ्यप्रति सजक व्यक्तिहरुको निम्ति धेरैवटा पसल घुमेर सामानह ... बाँकी अंश»
सरकारले उपचार नगरेपछि डा गोविन्द केसी हानिए रोल्पा
२०७३ भदौ ३० बिहिबार, रोल्पा । कसैलाई थाहै नदिएर डा गोविन्द केसी रोल्पा आएर बिरामीको उपचार गरेका छन् । झोलामा औषधि बोकेर सार्वजनिक बसमा आएका डा केसीले बुधबार बिहानदेखि सुलिचौरस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेर बिरामीको उपचार थालेका हुन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज डा मिलन बज्राचार्यका अनुसार डा केसी बिहान १०ः३० बजे सुलिचौर पुगेका थिए । स्वास्थ्य केन्द्र पुग्नुभन्दा दुई घन्टाअघि मात्र डा केसीले इन्चार्जलाई जानकारी दिएका थिए । मङ् ... बाँकी अंश»
सबै चिकित्सकलाई एकसाथ लिएर अघि बढ्छु : नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठ
२०७३ भदौ २८ मंगलबार, काठमाडौँ। नेपाल चिकित्सक सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठले सम्पूर्ण चिकित्सकलाई एकसाथ लिएर स्वास्थ्य पेसा र सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा अघि बढ्ने बताएका छन्। सोमबार निर्वाचन समितिले राखेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा नवनिर्वाचित डा अध्यक्ष श्रेष्ठले चिकित्सा क्षेत्र र पेसाको गरिमालाई अझ बढाएर लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘‘पछिल्लो समय चिकित्सा क्षेत्रमा विकृति बढेको र यसप्रतिको मर्या ... बाँकी अंश»
२०७३ भदौ २७ सोमबार, काँकडभिट्टा (झापा)। सरकारले दरबन्दीअनुसारका विशेषज्ञ डाक्टर नपठाउँदा मेची अञ्चल अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा समस्या भएको छ। अञ्चल अस्पतालमा १९ जना विशेषज्ञको दरबन्दी भएपनि छजना मात्र विशेषज्ञ कार्यरत हुँदा सेवाग्राहीलाई सेवा दिन समस्या भएको हो। यतिबेला बालरोग विशेषज्ञको तीनजनाको दरबन्दीमा एकजना छन्। स्त्रीरोगतर्फ तीनजना हुनुपर्नेमा एकजना, फिजिसियनमा पनि तीनजनाको दरबन्दीमा दुईजना विशेषज्ञ डाक्टर छन्। अस्पतालमा भर्खरै बेहो ... बाँकी अंश»
२०७३ भदौ २६ आइतबार, काठमाडौं । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका नाक, कान, घाँटी (इएनटी) विशेषज्ञ योगेश न्यौपानेले मुलुकभर फैलिएको भाइरल फ्लुबाट सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । अहिले फैलिइरहेको भाइरल विगतका तुलनाको जस्तो एक दुई दिनमै निको नहुने भन्दै डा. न्यौपानेले बिरामीलाई विशेष ध्यान दिन पनि आग्रह गरेका छन् । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा दैनिक सरदर २० जना रुघाखोकीको भाइरलका बिरामी आउने गरेको तथ्यांक सुनाउँदै डा. न्यौपानेले पहिलो चरणमै एन्टीबायोटिक औषधि नआइ ‘पर्ख र ... बाँकी अंश»